အနုပညာ Archives - Channel Lover
ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နိုင် လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ဒုက္ခပေးနေတဲ့ လူတစုကို ထိမိတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ပြောချလိုကတဲ့ ချစ်သုဝေ…
ကိုယတှိုငလှညှးမလုပနှိုငှ လုပနှတေဲ့သူတှကေိုလညှး ဒုကခွပေးနတေဲ့ လူတစုကို ထိမိတဲ့စကားလုံးတှနေဲ့ ပှောခလှိုကတဲ့ ခစှသှုဝေ… အာဏာရှငစှနစကှိုတောလှနရှငှးနဲ့ယနခှေိ့နထှိ ပုနှးရှောငနှခေဲ့ရတာကတော့ ခစှသှုဝတေို့မိသားစုပဲဖှစပှါတယှ။ သူတို့မိသားစုလေးဟာ အောငမှငကှောကှားတဲ့အနုပညာရှငတှဖှစကှပေမယှေ့ မတရားမှုကိုတှနှးလှနရှငှးနဲ့ ခုလိုထှကပှေးပုနှးရှောငနှရတောပါ။ ခတှနေဲ့သစလှေးဟာလညှး ကလေးတှဖှစကှပေမယှလေ့ညှး မိဘတှနေဲ့အတူ ပုနှးရှောငနှခေဲ့ရတာပါ။ မကှာသေးခငကှလညှး သူတို့ကိုရှာဖှမရတောကှောငှ့သူတို့ရဲ့အိမတှကေိုခှိတပှိတခှံရသေးတာပါ။ ဘယလှောကပှဲ မတရားမှုတှကှေုံနရပမယှေအေ့မှနတှရားအတှကဘှယလှောကခှကခှဲပါစရငဆှေိုငဖှို့အသငှ့ပါပဲ။ ခုမှာလညှး သူတို့မတရားခံခဲ့ရတဲ့ကိစစွတစခှုကိုထုတပှောခဲ့တာပါ။ သူမတို့ပိုငဆှိုငတှဲ့ Kpay အကောငှ့တှဒလနကှေောငှ့ပိတသှိမှးခံခဲ့ရတာပါ။ သှောဖှကှလှိုဖကှစှီးစိတတှမှေား အသကတှဘဝတှကေေူဖို့ကယဖှို့နနသေောသာ ကူကယသှူတှကေိုပါဒုကခွတှပေေး ဝဋလှညှးမကှောကှ သံသရာလညှးမကှောကှ အေးကှယစှိတလှကခှမှးသာရှိကှပါစေ တစကှယှ့ကိုရှိကှပါစဆေိုပှီး သူမရဲ့ခံစားခကှတှကေိုထုတပှောခဲ့တာဖှစပှါတယှ။ crd zawgyi ကိုယတွိုငလွညွးမလုပနွိုငွ လုပနွတေဲ့သူတှကေိုလညွး ဒုကခြပေးနတေဲ့ လူတစုကို ထိမိတဲ့စကားလုံးတှနေဲ့ ပှောခလှိုကတဲ့ ခစှသွုဝေ… အာဏာရှငစွနစကွိုတောလွှနရွငွးနဲ့ယနေ့ခှိနထွိ ပုနွးရှောငနွခေဲ့ရတာကတော့ ခစှသွုဝတေို့မိသားစုပဲဖှစပွါတယွ။ သူတို့မိသားစုလေးဟာ အောငမွှငကွှောကွှားတဲ့အနုပညာရှငတွှဖှစကွှေပမယွေ့ မတရားမှုကိုတှနွးလှနရွငွးနဲ့ ခုလိုထှကပွှေးပုနွးရှောငနွရတောပါ။ ခတွနေဲ့သစလွေးဟာလညွး ကလေးတှဖှစကွှေပမယွေ့လညွး မိဘတှနေဲ့အတူ ပုနွးရှောငနွခေဲ့ရတာပါ။ … Read more
ငှက်တွေအများကြီးလွတ်ပေးကာ ပရိတ်သတ်သူ့ကို ပြန်လက်ခံဖို့ ယတြာချေကြိုးစားနေတဲ့ ယုန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်..
ငှကျတှအေမြားကွီးလှတျပေးကာ ပရိတျသတျသူ့ကို ပွနျလကျခံဖို့ ယတွာခကြွေိုးစားနတေဲ့ ယုနျလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျ.. ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ အဆိုတျောယုနျလေးကတော့ ဂီတအနုပညာမှာ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝစှာမရှိတာကွောငျ့ အောငျမွငျမှုမရရှိခဲ့သလို သရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာအဖွဈ ကူးပွောငျးခြိနျမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အကွိုကျတှခွေ့ငျးကိုမခံရပဲ လူနညျးစုရဲ့အားပေးမှု ကိုသာ ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ယုနျလေးဟာ စဈတပျသင်ျကွနျကို သှားရောကျခဲ့ပွီး စဈတပျရဲ့ဒလနျဖွဈတယျလို့ ပရိသတျတှကေ ပွောဆိုနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ..။ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ ပဈပဈနှဈနှဈဝဖေနျမှုကိုရရှိခဲ့ပွီး မတ်ေတာပကျြခံခဲ့ရတဲ့ ယုနျလေးဟာ အကောငျးမွငျခံရဖို့ ပရဟိတနဲ့ အလှူတှကေို ဗနျးပွလုပျဆောငျနခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ယုနျလေးက သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘုတျပခြေျ့ကနေ ငှကျလှတျပွီး ကုသိုလျယူနခေဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကို မြှဝလောခဲ့ပါတယျ..။ယုနျလေးကတော့ အနုပညာနဲ့ပတျသကျလာရငျ တျောတျောလေးကို ပရိသတျဝဖေနျမှုရရှိခဲ့ပွီမို့ နောကျတဈခါ အနုပညာလောကထဲပွနျဝငျလာဖို့ဆိုတာ တျောတျောလေးခကျခဲသှားလောကျပါပွီ။ Crd Zawgyi ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ ဂီတအနုပညာမှာ … Read more
အရမ်းကိုလှပတဲ့သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Pre Wedding ပုံလေးတွေကို ပသလာတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မောင် (စိန်ဖြိုးလှိုင်)နဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ရီရီပွင့်ဖြူတို့စုံတွဲလေးကတော့ ဒီနေ့မှာ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ Pre Wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ထပ်မံမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ စိန်းဖြိုးနဲ့ ရီရီတို့ကတော့ ဒီတစ်ခါတင်တဲ့ Pre Wedding ပုံလေးတွေကတော့ တကယ်ကိုနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေဖြစ်ပြီး ဒီအချိန်ကာလမှာ မင်္ဂလာပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ရတာမလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာပွဲကို (၃) (၄)ပွဲမလုပ်ဘဲ (၁)ပွဲသာလုပ်မှာဖြစ်လို့ အမှတ်တရဖြစ်တဲ့ Pre Weddingဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ တဝကြီးရိုက်ဖိုက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာကြောင့် အခုလို Pre Wedding ပုံတွေက များသွားခဲ့တဲ့ရတာပါတဲ့။ စိန်ဖြိုးနဲ့ ရီရီတို့က မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲလေးကိုတော့ မကြာခင်မှာကျင်းပနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်တဲ့။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက စိန်ဖြိုးနဲ့ ရီရီတို့ကို ချစ်ကြတဲ့ … Read more
အရိုးကင်ဆာရော အသည်းကင်ဆာ ရောဂါပါ ဖြစ်နေပြီးဝေဒနာရဲ့ဒဏ် တွေကို အလူးအလဲ ခံစား နေရတဲ့….
မဂ်လာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ အရိုးကင်ဆာရော အသည်းကင်ဆာ ရောဂါပါ ဖြစ်နေပြီးဝေဒနာ ရဲ့ဒဏ် တွေကို အလူးအလဲ ခံစား နေရတဲ့ သူကို ဆေးဖိုး (၁၀) သိန်းကျပ်ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း ပရိသတ်ကြီးရေ ချယ်ရီသင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေး ချစ် ခင်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် အဆိုတော် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းပြီး အလှူအတန်းရက် ရောလှတဲ့ ချယ်ရီသင်းကတော့ လိုအပ်နေတဲ့သူ တွေကို သူတတ်နိုင် သလောက် အမြဲလိုလို ကူညီ ပေးလေ့ ရှိပါ တယ်။ လတ်တလော မှာလည်း ချယ်ရီသင်းက အရိုးကင်ဆာ ရော၊ အသည်း ကင်ဆာရောဂါ ပါဖြစ်နေပြီး ရောဂါ ဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင် … Read more
သမီးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို အလှတွေပြင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့လို့ အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီး တန်မိုရဲ့ မိခင်
သမီးဖှဈသူရဲ့ ဈာပနအခမွးအနားကို အလှတှပှငပွှေီး တကရွောကလွာခဲ့တဲ့အတှကွ အပှငွးအထနဝွဖနခွေံနရတေဲ့ “တနမွို”ရဲ့ မိခငွ ဖဖေောဝွါရီ ၂၄ ရကကွ နှနသွဘူရီမှို့ ကှောကဖွရားမှဈထဲသို့ စပိဘုတပွေါကွနေ ပှုတကွသှဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ထိုငွးနာမညကွှွော မငွးသမီး တနမွိုနိဒါ ရဲ့ စိတမွကောငွးစရာ ဖှဈရပလွေးကတော့ ထိုငွးပရိသတတွှအပှငွေ မှနမွာပရိသတတွှကှေားမှာပါ အတောလွေးကို ရိုကခွတသွှားခဲ့ပါတယွ။ အသကွ ၃၇ နှဈ အရှယသွာရှိသေးတဲ့ မငွးသမီး တနမွိုနိဒါ ဟာ တဈခှိနကွ ထိုငွးအလှပှိုငပွှဲမှာ ဝငရွောကယွဉပွှိုငခွဲ့ပှီး နောကပွိုငွးမှာ ထိုငွး TV Channel7ရုပသွံလိုငွးဇာတလွမွးတှဲတှထေဲမှာ ပါဝငသွရုပဆွောငခွဲ့တာ ဖှဈပါတယွ။ အဲ့ဒီနောကပွိုငွးမှာ သူမရဲ့ ကှိုးစားအားထုတမွှုတှကှေောငွ့ အခွိနခြဏလေးအတှငြးမှာ နာမညကြှီး မငြးသမီးတဈယောကဖြှဈလာခဲ့ပါတယြ။ သူမဟာ အရငကြ အိမထြောငကြခွဲ့ဖူးသူတဈယောကဖြှဈပှီး နှဈအနညြးငယအြတှငြးမှာပဲ သဘောထားခှငြး မတိုကဆြိုငတြော့တဲ့အတှကြ သူမရဲ့အိမထွောငပွကှစွီးသှားခဲ့ပါတယွ။ … Read more
” ဘတ် ၁၀၀ ဘဲတောင်းပြီး အမှန်တရားဖော်ပေးမယ့် တရားသူကြီး” ❣️!!!
” ဘတ် ၁၀၀ ဘဲတောင်းပြီး အမှန်တရားဖော်ပေးမယ့် တရားသူကြီး” ❣️!!! တရားသူကြီးချုပ်ဟောင်း “Mr.Rustang Supasri က “ကျေးလက်ဉပဒေ ” စာမျက်နှာ စာစောင်ကနေ တဆင့် သတင်းရေးတင်လိုက်တာကတော့ Mo အမှုက သူ သေမှု့သေခင်းတွေ ဆေးစစ်ချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ဒါ မတော်တဆမှု့မဟုတ်ပါဘူး | လူသတ်မှု့ပါ **တကယ်လို့ သူကို သာ အမှု့လိုက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်အဆင့်အမှု့လိုက်ခ အနေနဲ့ “ဘတ် ၁၀၀” သာယူမှာပါ အမေ ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါမလား *** ဆိုပြီး စာ နဲ့ အတူ Mo ရဲ့ အလောင်းပုံကို ပုံဆွဲပြီး သံသယ အချက်တွေပါ ထောက်ပြပေးထားပါတယ် • အလောင်းစစ်ဆေးချက်အရ * ညာမျက်လုံး ဖွင့်မရတာရယ် … Read more
သမီးအငယ်ဆုံးလေး နေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ပူနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
ပရိသတျကွီးရေ ရုပျရှငျနဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ နနျးမွတျဖွိုးသငျး ရဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူ ကိုတာတာမြိုး ဟာ ကိုဗဈရောဂါကို ပွငျးထနျစှာခံစားခဲ့ရပွီး ရုတျတရတျ ခဈြရတဲ့မိသားစုကို ခှဲခှာပွီးကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ခငျပှနျးကှယျလှနျသှားလို့ ဝမျးနညျးပူဆှေးနခေဲ့ရပမေယျ့ သူမကတော့ ခဈြရတဲ့သားသားမီးမီးတို့အတှကျ ဘဝကိုကွိုးစားရုနျးကနျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဖခငျမရှိတော့ပမေယျ့ အားငယျစိတျမဝငျအောငျ ကလေးနှဈယောကျကို လိုလေးသေးမရှိဘဲ လူတနျးစထေ့ားနိုငျအောငျ သူမကအစှမျးကုနျကွိုးစားနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ခငျပှနျးမရှိတော့တဲ့ သူမဟာ ကနျြရဈခဲ့တဲ့ ကလေးနှဈယောကျရဲ့ ပညာရေးအတှကျ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ကြောငျးမှာထားပေးဖို့ ရညျမှနျးခကျြကို ပွညျ့မှီအောငျလဲ ကွိုးစားနပေါသေးတယျ။ သရုပျဆောငျ နနျးမွတျဖွိုးသငျး ဟာ သမီးအငယျဆုံးလေး ဂြူးဂြူး နမေကောငျးဖွဈနတောကွောငျ့ စိုးရိမျစိတျပူနပေါတယျနျော။ ” ဂြူးလေးဖြားနပေီ ရာသီဥတုကပူ မီးကပကျြ ကလေးကခြှေးတှထှေကျ အပူရှပျတာလား ခြှေးအေးပတျတယျချေါလားမသိတော့ပါဘူး သမီးလေးမို့လားမသိ ဂကျြနဲ့မတူတအားခြှဲတာပဲ အမွဲရီပီပြျောနတေဲ့ကလေး မှိုငျနတေော့စိတျမကောငျးတှဖွေဈရတယျ”လို့ ရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ Cele … Read more
Mo ရဲ့ ညာခြေထောက်ဒဏ်ရာဟာ ပန်ကာနဲ့ထိမိတာ မဟုတ်ကြောင်း ပြသ” (ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အစိုးရဆရာဝန်က လက်တွေ့ပြပေးထားတာပါ မင်းသမီးလေးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းလေးကို အားလုံးသိကြပီး ဖြစ်မှာပါ။ အခုတော့ တရားခံ အစစ်အမှန်ကို မသိရသေးပေမယ့် အမှုမှန် အမြန်ဆုံး ပေါ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…။ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပီး မိမိထင်မြင်ရာလေးတွေ မန့်ထားနိုင်ပါတယ်…။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး အေးချမ်းနိုင်ပါစေ…။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပီး ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများလဲ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ…။ unicode Mo ရဲ့ ညာခွထေောကျဒဏျရာဟာ ပနျကာနဲ့ထိမိတာ မဟုတျကွောငျး ပွသ” (ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ အစိုးရဆရာဝနျက လကျတှပွေ့ပေးထားတာပါ မငျးသမီးလေးရဲ့ စိတျမကောငျးစရာ ကွကှေဲစရာ … Read more
အဒေါ်ဖြစ်သူဗေဒင်ဆရာမကြီး ET ပြန်ဝင်စားတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမှုတချို့ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖေဖေ စည်ဖြိုး… ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..ဇာတ်ဝင်ခန်းတိုင်းမှာ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အတူ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြောင့် အချစ်တွေပိုနေရတာကတော့ သရုပ်ဆောင်စည်ဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကလည်းပရိသတ်တွေကို ခံစားမှုရသတွေပေးနိုင်တာကြောင့်ချစ်နေရတာပါ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး မာနမထားပဲ ကူညီတက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေကြောင့် အနုပညာရှင်အချင်းချင်းကပါ ချစ်ခင်ပေးနေတာပါ။ သူကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့ အတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ချစ်ဇနီးလေး ခင်လွှမ်းကလည်း ပရိသတ် အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးကို ချစ်ပေးရတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ ။မြေးဦးလေးဖြစ်တဲ့စည်ဖြိုးရဲ့သမီးလေးကို အဖွားဖြစ်သူကလည်းသဲသဲလှုပ်ချစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စည်ဖြိုးရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူဗေဒင်ဆရာမကြီး ET ကလည်း စည်ဖြိုးရဲ့သမီးလေးကိုဝင်စားတယ်ဆိုပြီး သမီးလေးမမွေးခင်က အရိပ်လက္ခဏာတွေနဲ့အိမ်မက်တွေပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နော်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း စည်ဖြိုးက သမီးလေးShandra ရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူလေးတစ်ခုကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ သမီးလေးကသူ့လက်ကလေးကိုဖြန့်ဖြန့်ကြည့်ပြီးပြုံးနေတာတွေ့ရလို့အံ့သြနေတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ”အမြဲ သူ့ လက်ဖဝါးသူတစိမ့်စိမ့် … Read more